Kukhona ama-runs angatholwa – u-Markram
Ovula umdlalo ngokushaya kuma-Standard Bank Proteas, u-Aiden Markram, uthi akhona amathuba okuthi abashayayo badlale indima kwisimo esikhona kwi-Freedom Series kudlalwa ne-India. Umdlalo wokuqala we-Sunfoil Test e-PPC Newlands ubunama-runs amancane, kodwa u-Markram ukholwa ukuthi indawo yokudlala yase-SuperSport Park izosiza abashayayo kwi-Test yesibili ezoqala ngoMgqibelo.
u-Markram uwuqale kahle umsebenzi wakhe wekhilikithi yomhlaba – emuva kwemidlalo emine usethole ama-runs angu-419 okubalwa khona amakhulu amabili – kodwa ubhekene nenselelo yakhe enkulu kudlalwa neqembu elingu-No. 1 kuma-Test. Uthi abashayayo bayazithemba nokho benze okuncane kumdlalo wokuqala we-Test, futhi kukhona okubalulekile abakufundile kwisimo sase-PPC Newlands okuzobasebenzela kuze kuphele i-series.
“Kumele wenze umhlatshelo weqembu,” ekhuluma e-SuperSport Park ngoLwesine. “Uzolenzela noma yini iqembu futhi lapha (lesisimo) okunye kwezinto okumele udlule kuzo. Angeke sikwamukele ukuthi abashayayo abakwazi ukuthola ama-runs. Ngisakholwa ukuthi abashayayo bangabambeka futhi bathole ama-runs. Angeke kubelula, kusazoba inselelo, kodwa ngicabanga ukuthi uma uzikhandla futhi udlale isikhathi eside ngezinhlelo zakho ezihambelana nawe njengomdlali akhona ama-runs akhona.”
“Unezinhlelo zomdlalo mayelana nama-wicket,” esho echaza. “Kumele ngijwayele amanye ama-pitch kodwa angifunanga ukulahlekelwa amandla engishaya ngawo, yinto engiyigcina eduze kwami futhi engikubala njalo. Uma ngishaya ngamandla afanayo nginyakaza kangcono futhi ukuma kwami kunamandla. Inselelo engizilethela yona futhi kuqala ngokuqeqesha. Ngenhlanhla sizobhekana nabahlaselayo abahamba phambili futhi akulula ngakho ukubheka amandla wami yinto engihlezi ngiyisebenzela.”
u-Markram uthi ‘kujabulisa kakhulu’ ukudlala umdlalo wakhe wokuqala enkundleni yakhe yasekhaya, okuphinde kube indlu enzima kuma-Proteas. Ama-Proteas ahlulwa emidlalweni emibili kuleyo engu-22 eyadlalwa, futhi bazobe bebheke ukuqhubeka nerekhodi labo bebheke i-series.
“Inkundla enhle yama-Test,” esho. “Kufika izihlwele futhi kufika abantu abaningi ukuzobuka futhi bayalisekela iqembu. Uma kukhulunywa ngekhilikithi, kuyi-wicket okuthi uma uhlelile njengoshayayo kunama-runs angatholakala, kodwa njengophosayo, kanye ne-pace ne-bounce. Kuzoba umdlalo we-Test ojabulisayo, engiwubhekile.”
Amathikithi omdlalo asatholakala ku-www.ticketpro.co.za
u-Rabada ufuna ukubangcono u-Olivier no-Ngidi bafakiwe kwiqembu lama-Test u-Philander uqeda ukulwa kwe-India ngokuhlasela kathathu u-Dale Steyn ukhishiwe kwi-Test yokuqala u-Pandya ukopela ukuhlasela kwa-AB ukunciphisa ukuhola kwama-Proteas Ukuhlasela okuholwe u-De Villiers kuphindisele ama-Proteas endleleni Ukukhetha iqembu okunzima kakhulu lokhu - u-Du Plessis u-Philander ubuyele emdlalweni Abadlali bakutholile akade bekudinga kumdlalo wokugcina wamalungiselelo – u-Gwavu u-De Villiers ukuphakamisela izithupha ukudlala ngebhola elibomvana Ama-wicket amahlanu ka-Morkel no-Maharaj anqobise ama-Proteas nge-innings